ITUB ENKULU I-B&B | Big Tub Suite
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMike
IBig Tub B&B kukuhamba imizuzu emi-5 ukuya kumbindi wedolophu yaseTobermory, iChi Cheemaun, ukufikelela emanzini kunye nokhenketho lwesikhephe. Saziwa ngobubele bethu kunye neziko elicocekileyo kakhulu! Le suite yomgangatho we-2 ibekwe kwikhaya elisanda kwakhiwa, kwaye inomnyango wayo wabucala. Ngenxa ye-Covid-19, siye salunciphisa unxibelelwano phakathi kweendwendwe ngokungabi nandawo ziqhelekileyo. Isidlo sakusasa siya kuhanjiswa kwigumbi lakho ngo-9:00am.
Le suite ibekwe kumgangatho we-2 wepropathi yeBig Tub B&B. Iquka ukungena kwangasese, i-deck yangasese, i-Smart TV kunye ne-Netflix, i-WIFI, ifriji encinci, indawo yomlilo yombane kunye negumbi lokuhlambela langasese kunye neshawa. Igumbi lokulala libonelela ngebhedi elingana neKumkanikazi. Idesika ilungile ekujongeni inkwenkwezi ebusuku kwaye uphumle kwilanga laseTobermory emini!
Ngenxa ye-Covid-19, sithatha inyameko enkulu ukunciphisa unxibelelwano phakathi kweendwendwe. Igumbi ngalinye linomnyango walo wabucala.
Isidlo sakusasa esishushu siya kunikezelwa emnyango wakho ngo-9:00am. Ikofu yasimahla iyafumaneka kwisiza.
Eli gumbi AKUKHO ububele kwizilwanyana zasekhaya.
Indawo yokupaka yasimahla yemoto enye iyafumaneka kwisiza.
Sifumaneka kumgama nje wemizuzu emi-5 ukuya embindini wedolophu, izibuko eliphambili, iChi Cheemaun, ivenkile, iindawo zokutyela, ukufikelela emanzini, iBruce Trail, kunye nokhenketho lwesikhephe.
Sikumgama womzuzu omnye kuphela wokuhamba ukusuka kwidokhi yaseChi Cheemaun, ke ukuba ubambe isikhitshane sokuqala ukuya eManitoulin, awuzukuhamba mgama!
Iindwendwe zingathumela umyalezo kum ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ezinokuvela ngexesha lokuhlala kwazo. Ndiza kuba lapho ngokobuqu ukuze ndibajonge. Mna nomfazi wam sihlala kulo mhlaba ngokunjalo, kodwa sinesango lokungena elahlukileyo.
Iindwendwe zingathumela umyalezo kum ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ezinokuvela ngexesha lokuhlala kwazo. Ndiza kuba lapho ngokobuqu ukuze ndibajonge. Mna nomfazi wam s…